Cotswolds, Contemporary Cabin Retreat, Miserden - I-Airbnb
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguJonathan
Wamkelekile kwiKhabhinethi emi kumda welali entle yaseCotswold eMiserden. Ikhabhinethi ibonelela ngendawo yokuhlala etofotofo, enendawo yokupaka yabucala, indawo yokungena kunye negadi. Indawo yokuhlala ibonelela ngendawo eyaneleyo yabantu ababini abanebhedi ephindwe kabini, ibhedi yesofa, i-tv, i-wifi, ikhitshi (akukho sipheki) kunye nenjongo yokuhlambela eyakhelwe ixesha lokuphumla kude. Kukho ukufikelela okugqwesileyo kwizinto zasekhaya, ukuhamba ecaleni kwelizwe, ukukhwela ibhayisekile kunye nezinto ezinomtsalane. I-Cheltenham Cirencester kunye neStroud kukuhamba nje okufutshane.
IKhabhin yindawo yangoku, eyakhiwe ngenjongo yokubuyela emaphandleni. Iyakwazi ukulala ngokulula abantu abadala aba-2, kwaye inokhetho lokulala ngakumbi (nceda uqhagamshelane nathi kwangaphambili). Kukho i-sofabed (isayizi yokulala yomntwana kuphela). Indawo yokuhlala yeyale mihla kunye nezinto eziluncedo ezibandakanya i-smart tv enefreesat, i-wifi, itafile yokutyela nezitulo kunye neendawo zokupheka, iketile kunye nethosta.
Oomatrasi bomgangatho uyafumaneka xa uceliwe kodwa nceda unikeze eyakho indawo yokulala ukuba usebenzisa le ndawo okanye ibhedi yesofa. Indawo yokuhlala ephambili ifudunyezwa ngokufudumeza ngaphantsi kwaye ine-air-conditioning ngokupheleleyo.
IKhabhin ixhamla kwindawo yegadi yabucala evalwe ngokupheleleyo kwaye inezihlalo kunye nebhentshi yepikiniki eneparasol (egcinwe ebusika, nceda ucele ukusetyenziswa phakathi kuka-Oktobha noMatshi).
Ukugcinwa ngokukhuselekileyo koMjikelo kukho kwindawo eneshedi yebhayisekile yase-Asgard enegumbi ukuya kuthi ga kwiibhayisekile ezi-2. Le ndawo ineendlela ezimangalisayo zokukhwela ibhayisekile-iMiserden ikwincopho yenduli yaseCotswolds ke zonke iindlela ziphezulu kwindlela ebuyayo! ukuba ungathanda ezinye iindlela nceda ubuze kwaye uJon unokubonelela ngeemephu okanye iifayile zeGPS.
IMiserden yilali egqibeleleyo yaseCotswold ebekwe ngaphakathi kwembasa ephumelele ibhaso iMiserden Estate. Inevenkile kunye neposi, isikolo samabanga aphantsi, i-pub, i-garden nursery kunye neegadi zaseMiserden. Kumnyango kukho iindawo ezininzi zasemaphandleni kunye neendawo zokuhamba ezinamahlathi. ICirencester, iStroud, iGloucester kunye neCheltenham ziimoto ezimfutshane kuphela. ikwayindawo entle yokukhwela ibhayisekile, nangona ulungele iinduli ezithile! Zininzi iindlela ezinkulu kwaye iHlathi leDean likumgama we-45mins kuphela kwaye iprojekthi ye-417 yee-MTBs ezinamava kukuqhutywa kwe-10min.
Siqhuba iVenkile yeLali esecaleni komnyango kwaye siya kuhlala sizenza sifumaneke kwiindwendwe. Siqhagamsheleka ngokulula ngeeselfowuni kunye neefowuni zasekhaya. nceda ubuze nje ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nekhabhinethi okanye izibonelelo zendawo.
Siqhuba iVenkile yeLali esecaleni komnyango kwaye siya kuhlala sizenza sifumaneke kwiindwendwe. Siqhagamsheleka ngokulula ngeeselfowuni kunye neefowuni zasekhaya. nceda ubuze nje u…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Miserden